SOMALILAND:BOROBOGAANDADA IYO QABYAALADDA IS HUWANI WAA AAFO INNA HAYSATA
Sunday, 26 August 2018 17:56
Qormadani waxay daba socotaa laba qormo oo hore oo aan si kooban ugaga hadlay dhibaatada ay bulshadeena badeen kooxaha qabyaaladda ku adeegtaa, iyo sida wararka malo awaalka ahi u yihiin xaalad inagu taagan.
Qormadan maantuna waa tii seddexaad oo aan si guudmar ah ugaga hadli-doono haddii Alle idmo, QODOBADII 3aad oo ku saabsan sida borobogaandaha iyo qabyaaladda is huwani u naafeeyeen hankii iyo himiladii aynu la lahayn.
Ummad kastaaba meesha ay ujeedo waxa lagu qiimeeyaa sida ay u fikirayso iyo sida ay wax qabsanayso, taa saana halbeeg u noqon karta, xagga loo socdaa meesha ay tahay.
Xaqiiqda maanta dhulkeena taalaa waxay inoo sheegaysaa in aynaan haynin dhabihii loo mari lahaa nolosha aynu maanka ku hayno.
Waxaana taa sabab looga dhigi-karaa borobogaandaha qabyaaladda la huwiyay ee dhulkeena sida dabaylaha u garaacaya, kaa soo saameyn taban ku yeeshay habkii ay bulshadeenu u fikiraysay, gaar ahaan kuwii laga sugayay in ay bulshadooda u horseedaan horumar iyo barwaaqo ku qotoma cadaalad iyo sinaan.
Waxyaalaha furaha u ah in ay bulshooyinku horumar ku tallaabsadaan waxa kow ka ah, hadba sida ay u fikirayaan kuwa bulshada hogaanka u ahi, gaar ahaan kuwa siyaasadda, kuwa aqoonta, kuwa saxaafadda iyo kuwa dhaqanka, taa soo ay waliba jaangoyso tirada boqolleyda ugu badani xagga ay raacsan tahay, haddii 60-80% ay laabahooda ka guuxayso aragti horumarineed, oo ku qotonta midnimo, aqoon iyo karti, waxa hubaal ah in bulshadaasi hayso dhabihii horumarka.
Haddii boqolleyda tirada ugu badan ee labeenta bulshada ay ka madhan tahay aragti iyo himilo ay ku hogaamiyaan bulshadooda (vission and mission), waxay bulshadaasi dhaxashaa colaado iyo saboolnimo is barkan oo nolosha ka aafeeya.
Hadaba xaaladda maanta dhulkeena taalaa maaha miday ku farxayaan cidkasta oo uu damac ka hayay, in ay aragto S/land oo barwaaqo iyo horumar ku naaloonaysa, maxaa-yeelay waxaad arkaysaa aqoonyahankii wadankani lahaa oo aanay ka muuqan gudashada waajibaadkii ka saarnaa in ay bulshadooda ka sabata bixiyaan xanuunka qabyaaladda ee sida ba’an u aafeeyay, taa soo ay wali muuqato inay tahli-la’yihiin sidii ay bulshadooda ugu jeexi-la-haayeen dariiq cusub oo ay kaga gudbaan deyrka saboolnimada iyo kala daadsanaanta.
Waxa kale oo aad arkaysaa da'yartii wax baratay ee lays lahaa waxay la iman doonaan aragti cusub oo ka duwan tii hore ee aynu ku dayownay, oo iyagiina xaalkoodu dhaafiwaayay in ay ku daba-faylaan, kooxoha ay qabyaaladu u tahay xirfada ay ku xoogsadaan, waxa kale oo aad arkayso in doodaha ugu badan ee ay dhalinyaradu iswaydaarsanayaan ay ka bidhaamayso qabyaalad iyo kala qaybsanaan weyn oo ka dhexjirta da’yarta soo koraysa.
Waxa iyana uurkutaalo iyo xanuunba kugu reebayasa, markaad aragto siyaasiyiintii laga sugayay in ay ummadooda mideeyaan oo abaabulaya shir beeleedyo ummadda lagu sii kala fogaynayo, taa soo hadala ay jeedinayaanna ay ka muuqanayso aragti qabiil ku talaalani.
Waxaad iswaydiinaysaa miyaanay garwaaqsan siyaasiyiinta S/land in sharafta iyo karaamadu ku jirto shacabka oo la miyeeyo, laguna hogaamiyo sinaan iyo cadaalad?.
Miyaanay garwaaqsan in baahida ugu weyn ee shacabkani tabayaa ay tahay, in laysu-geeyo maalkoodo, muruqooda iyo masgaxdooda?, taa soo ah sifada ugu haboon ee lagu qiimayn karo siyaasiga xalaasha ah, ee ay gubayso aragti ummadeed, islamarkaana ay ka muuqato han iyo himilo toolmooni.
Arintan kale ee iyana walwalka lihi waxa weeyaan, markaad aragto madax-dhaqameed warbaahinta marinaya erayo dhiilo leh oo lagu kala dhantaalayo midnimada iyo wadajirka bulshada S/land, ku waa soo markay ereyadaya dhiiftu ka muuqato ay bulshadooda ku dhex-tuurayaan, isu muujinaya in ay difaacayaan xuquuqda reeraha ay ka dhasheen, waxay'se xaqiiqdu tahay in aan cidina uga cadowsanayn cidda maanta u kala abtirinaysa shacab walaalo ah, oo waliba dan-wadaag ah.
kuwa horumarka iyo wada-noolaansha ku caaroodaa, waxay u jeedooyinkooda dahsoon u adeegsadaan, borobogaande iyo buunbuunin ay bulshada ku marin-habaabinayaan, taa soo ay uga denleeyihiin in ay ku gaadhaan danahooda ka sameysan xuubka caarada.
Cidda'se dhibaatadu haysataa waa masaakiinta la lug dhabaysa duruufta iyo waayaha ku meersan, ee hadana maalin walba meel madaxa loo galinayo.
Waxay shacabkani maanka ku hayaan, kaalinta ay kaga jiraan tartanka ay dunudu wadaagayso, kaa soo la xidhiidha ilbaxnimada iyo aqoonta ay dunidu maalayso, iyo sida ay iyagu meel cila’ah uga taagan yihiin cilmiga iyo xadaarada ay dunidu laba-lisayso, waxaanay iswaydiinayaan maxay caqliga iyo garashada inagu jirtaa ay ugu fikiriwaday, sida ay u fikirayaan dadyowga kale ee koonkan inagula nooli? Waxay iswaydiinayaan ma xoogga, masgaxda iyo dhulka aynu leenahay ayaan la mid ahayn kuwa ay dadyowga kale leeyihiin?.
Wax kastaba ha iswaydiiyaane, xaqiiqdu waxa ay tahay in ummadaha horumaray ay ka faa’iidaysteen fursadihii iyo jaanisyadii ay heleen intii ay ku soo jireen, hayaankii dheeraa ee ay noloshu soo maraysay, inagana aanay waxba inooga kordhaynin isbadalada iyo dhacdooyinka habeen iyo maalinba inna soo marayaa.
Si kastaba ha ahaatee waxay shacabkan masaakiinta ahi eersanayaan, dadkii inta ay dunidu kala macaashaysay iyaga qabiilooyinka u kale ooday.
More in this category: « Maamuuska sare ee sucuudigu ku qaabiley Xaaji C/raxman Zaylici Waa Boqortooyo soo dhaweynaysa lafaha Boqortooyo hore oo maanta somaliland kamid ah qaybtii 1aad Dr.khadar-Libaaxley. HAMBALYO:Siciid Abdi Siciid Cisman iyo Fadumo Abdinasir X.Muxumed Meygaag Oo Meherkoogu Ka Dhacay Magaalada Borama +SAWIRO »